Muxuu Yuusuf Garaad Ku Waynayaa Xilkiisa Wasiirnimo? (Sababo Muhiim Ah) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Muxuu Yuusuf Garaad Ku Waynayaa Xilkiisa Wasiirnimo? (Sababo Muhiim Ah)
Yuusuf Garaad oo heerar kala duwan nolosha kasoo gaaray ayaa ugu dambeyn siyaasadda kusoo biiray sannadkii 2012-kii, waxaana uu xilligaas isku soo sharaxay xilka madaxtinimo ee dalka.
Ugu dambeyn Waa uu ku guuldarreystay, balse wuxuu helay in uu safiir ka noqdo dalka UK, kaddib waxaa u xigtay in uu Soomaaliya kusoo noqdo, oo uu soo doonto wasiirnimo; ra’iisul wasaare Kherre ayuu la kawsaday, oo waxaa loo magacaabay wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya.
Lix bilood ayaa kasoo wareegatay markii Yuusuf loo magacaabay xilkaas, balse waxaa hadda kujirta magaalada warar sheegaya in dhawaan isku shaandheyn lagu sameyn doono golaha wasiirrada Soomaaliya.
Tan iyo markii la maqlay hadalkaas cadaadiska ayaa kusii badanayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar, kaas dhawaan la hor geeyay golaha shacabka.
Su’aasha iswayddiinta mudan ayaa ah “Muxuu Yuusuf Garaad Ku Waynayaa Xilkiisa wasiirnimo?” jawaabta su’aashaas waxa ay u baahan tahay in darafyo kala duwan laga keeno oo la taxliiliyo.
Dadka qaar ayaa sheegaya in Yuusuf aysan ku qanacsaneyn beeshiisa, maadaama Habar gidir Ceyrka uu kasoo jeedo uusan awood siyaasadda ku dhex lahayn.
Waa Ceyr, balse lafta uu ka yahay ee “Babaashaha” ayaan saameyn mugleh ku lahayn siyaasadda, maadaama ay yihiin kuwa daga Kelinka Shanaad iyo golada qaar ee xudduudda Ethiopia ku dhaw, tiro ahaanna laga badan yahay marka reerkiisa Ceyr ka ah gudaha loosii galo.
Sababta kale ee uu ku wayn karo xilkiisa waa in aysan isku qanacsaneyn Farmaajo oo u arka qof shakhsi ahaan aan xukuumaddiisa kujiri karin.
Yuusuf markii hore ba wuxuu ahaa dookha labaad ee reerkiisa, maadaama C/raxmaan C/shakuur uu cod qayaxan ku diiday madaxwayne Farmaajo, sidaa darteeda waxaa laga yaabaa in ay is af fahmeen Farmaajo iyo C/shakuur, kaddib na loosoo jeestay Yuusuf.
Sabab kale oo uu ku wayn karo xilkiisa waa in uusan ahayn qof reerkiisa uu dhageysanayo; waa cajiib arrimaha ugu waa wayn ee beesha Cayr loosiiyay wasiirka Habar Gidir waxa ay ahayd in uu si wanaagsan u dardar geliyo wada hadallada Ahlu Sunna iyo Dawladda, balse middaas lagama helin, mana jirto sabab kale oo loo sii heysto.
Waxa ay tahay sababaha uu kuwayn karo xilkiisa wasiirka arrimaha dibadda Soomaali Yuusuf Garaad Cumar oo laga yaabo in uu ku baxo isku shaandheynta dhawaan la qorsheynayo.